PMC dia manendry Studios varotra amin'ny maha-mpizara azy Thai ho an'ny mpanara-maso ny Audio Audio rehetra - NAB Show News nataon'i Broadcast Beat, Broadcast an'ny NAB Show - NAB Show LIVE
Home » News » PMC dia manendry Studios varotra amin'ny maha-mpizara azy Thailandey ho an'ny rehetra Pro Monitor
PMC dia manendry Studios varotra amin'ny maha-mpizara azy Thailandey ho an'ny rehetra Pro Monitor
PMC Speaker dia nanambara fa Vintage Studios dia notendrena ho mpaninjara ofisialy any Thailand, miaraka amin'ny vokatra momba ny vokatra fanaraha-maso matihanina rehetra ao amin'ny orinasa.
Ao amin'ny distrikan Bang Na any Bangkok, Vintage Studios dia natsangana tao 2002 avy amin'ny fianakaviana Puengrusme ho toy ny fandraketana mozika ara-barotra, mifangaro ary fanamoriana. Ny fanirian'ny fianakavian'i Puengrusme amin'ny mozika sy ny saina amin'ny antsipirihany dia nahazo hoavy ho an'ny Vintage Studios ary laza ho an'ny valiny avo lenta.
Ao amin'ny 2016 Vintage Studios dia nametraka kofehy vaovao teo am-bavany tamin'ny alàlan'ny fizarana entana ho an'ny vokatra Solid State Logic. Mizara karazan-tsarimihetsika pro-avo lenta miaraka ankehitriny izy ao anatin'izany ny Furman, Bock Audio ary Soundelux. Ankoatr'izay, dia nitatra hatrany amin'ny sehatry ny fanabeazana ary nitarika fihetsiketsehana, lalam-piofanana ary programa internship amin'ny oniversite tao amin'ny kompany telo-studio nifanarahana tamin'ny mpanamboatra sy ny sekoly fampianarana Thai.
Ny fanapahan-kevitra hiditra amin'ny fifanarahana fampielezana amin'ny PMC dia mora ho an'ny Vintage Studios. Ny tranobe dia manana ny fanaraha-maso PMC amin'ireo efitrano fifehezana telo - ny MB3 XBD-A ary ny mpanara-maso ny twotwo6 ao amin'ny efitranony lehibe, ny mpanara-maso ny twotwo8 any amin'ny studio faharoa ary ny fanamarinana vao haingana novokarina tato am-piangonana akaiky6 ao amin'ny studio telo.
Ilay tompon-trano sy mpanorina ny Vintage Studios Sudatip Puengrusme dia nilaza: “marika mahafinaritra ny PMC ary lova lehibe. Ny feon'ny mpanara-maso azy dia tsy misy fangarony noho ny teknolojia Advanced Transmission Line tsy manam-paharoa ary faly izahay rehetra ny afaka mitondra ity haavo kalitao ity amin'ny tsena Thai. Ny olona rehetra naheno ny PMC ao amin'ny studio anay dia tena gaga be. ”
Sudatip Puengrusme dia manampy fa ny modely PMC ao amin'ny efitrano tsirairay no nofidina mba hifanaraka amin'ny haingon-trano sy ny haben'ny sehatra tsirairay ary koa ny fahafahan'izy ireo mamoaka valiny lehibe rehefa misy fandraisam-peo na ny fampifangaroana na fanatrarana ireo mpanjifa.
"Mampiasa azy ireo izahay amin'ny fanaovana fihetsiketsehana satria ny marika dia mbola vaovao amin'ny tsenan'i Thai," hoy ny fanazavany. “Na izany aza, manana vanim-potoana fampidirana mahomby izahay ary efa manomboka mividy PMC ny olona ao Thailand. Tamin'ny volana lasa teo, rehefa tonga teto i Chris Allen, manam-pahaizana manokana momba ny vokatra, dia nanasa ireo mpamokatra sy mpitendry zavamaneno teo an-toerana izahay hanatrika fivoriana fihainoana ary tena nanaitra ny rehetra ny mpanara-maso. Faly be koa ny mpiasa ao amin'izy ireo. ”
Chris Allen avy amin'ny PMC, dia nanampy hoe: "Ny fiarahana amin'ny Vintage Studios dia traikefa hafa samihafa satria izy ireo dia toeram-pivarotana rakotra ara-barotra ary manana fifandraisana akaiky amin'ny ankamaroan'ny mpilalao fototra amin'ny sehatry ny mozika Thai. Ho antsika dia tombony lehibe izany satria marina isika tamin'ny fanombohana ny fametrahana ny PMC ho marika any Thailandy. Matoky izahay fa rehefa maheno ny feon'ireo mpanara-maso ny feonay dia maniry ny hividy azy ireo izy ireo - ary hanana orinasa toa an'i Vintage Studios amin'ny maha-masoivoho antsika dia zava-dehibe amin'ny fahombiazantsika ho avy. Inona koa no tena mavitrika amin'ny sehatry ny fanabeazana, izay mifanaraka amin'ny etika amin'ny fanohanan'ireo mpitendry mozika sy mpamokatra hatrany am-piandohan'ny fikarakarana azy. ”
Vintage Studios dia efa nandray baiko ho an'ny mpivady PMC IB1S-A hanara-maso ny trano ara-barotra sy ny mpanara-maso IB2 XBD-A iray, izay hapetraka ao amin'ny studio manokana. Ireo mpanjifa Thailand izay te-hiaina ny feon'ny mpanara-maso IB2 XBD dia ho afaka hamangy ity studio ity satria faly ny tompony fa ho ampiasaina ho fitaovana demo fanampiny.
PMC dia UK-monina, izao tontolo izao-nitarika mpanamboatra ny fanamafisam-peo rafitra, ny fitaovana ny safidy rehetra Ultra-dehibe matihanina fanaraha-maso ny fampiharana, ary koa ho an'ny mahay manavaka audiophile ao an-trano, izay manome mangarahara varavarankely ho ao an-peo mpanakanto am-boalohany fikasana. PMC vokatra mampiasa ny tsara indrindra misy fitaovana sy famolavolana fitsipika, anisan'izany ny orinasa ny format manan-tompo Advanced Transmission-dalana (ATL ™) basse-Loading teknolojia, nanapaka-tsisin'ny amplification sady nandroso DSP teknika mba hamorona fanamafisam-peo ireo ny zavatra hateriny feo sy ny mozika tsara tahaka ny fony voalohany namorona , miaraka amin'ny ambony indrindra azo atao vahaolana, ary raha tsy coloration na nanolana ny fahamarinana. Raha mila fanazavana fanampiny eo amin'ny mpanjifa sy ny vokatra, dia jereo ny www.pmc-speakers.com.
Toerana misy rahona Axon Teknolojia ao am-pon'ireo Multivendor voalohany, UHD IP HDR ivelan'ny Broadcast Truck - Desambra 12, 2019
Cobalt Encoder Distributor MB2 XBD-A PMC Mpandahateny result6 Thailand twotwo6 twotwo8 Vintage Studios	2019-11-08
Previous: NewTek TriCaster® Mini mitondra ao amin'ny famokarana haino aman-jery UHD nomerika sy mikoriana amin'ny sekoly, orinasa ary matihanina AV
Next: NUGEN Manolotra Plug-Ins ho an'ny horonam-peo tsy misy fehezanteny ho an'ny mozika sy fahitalavitra